Archives | Civil Rights Movement For Burma
Prof Urges Students to Consider Oppression of The Rohingya
by rightsforburma | Oct 31, 2017 | English, NEWS
The Rohingya crisis has been termeda“textbook example of ethnic cleansing” and one of the worst humanitarian disasters of this decade. At Cornell, organizations will be rallying to raise awareness about the crisis in November, but students were able to hear about it firsthand from Prof. Gayatri Spivak, English and comparative literature, Columbia, on Monday.
The Rohingya areastateless Indo-Aryan, dominantly Muslim people living in Myanmar. They are persecuted inacountry where Buddhism is the prevalent religion, and they are even denied citizenship.
Spivak, an activist for rural education in Asia, first encountered the Rohingya in Bangladesh in the 1980s, where she said she saw them being shot at as they attempted to cross the Naf River, which marks the boundary between Bangladesh and Myanmar.
“I have never seen human beings so degraded by oppression, so robbed of dignity,” Spivak said.
Today, she said she feelsaneed to “speak for them, to them, and about them” whenever possible.
Spivak urged her audience to not only consider the Rohingya asaminority oppressed group, but to also regard them as human beings. Rather than think “they are like us,” imagine “we are like them,” she said.
Spivak said that unless we can envision ourselves as the same as them — as human beings — all the same, it is not worth it in the long run working to emancipate them.
“They cannot represent themselves, so they must be represented” by us, she said.
While in Myanmar, she witnessedacouple of Rohingya women sitting in the mud. Born in Calcutta, India, and similar in appearance, Spivak said she was willing to stand in the most impoverished parts of Myanmar and immerse herself completely in the culture.
The Rohingya women “saw something in my face” and thought “this is one of us,” Spivak said. “They spoke to me … They could tell I thought they were human beings. This wasahuge discovery.”
The ability to drawaresponse from the other side acted as the impetus to dedicate herself to the Rohingya issue and reach out to these mistreated men and women, Spivak said.
One major abuse Rohingya women face is rape, Spivak said.
“Rape is at work all over the world, including in countries where we live,” she said.
In Myanmar, it is bothamillennial tradition andaweapon to ethnic cleanse, Spivak said.
Furthermore, the Rohingya lack equality in regards to the people of Myanmar. In the nation-state, they are denied citizenship and cannot vote.
The Rohingya are not technically illegal immigrants, but they are stateless, Spivak said.
“We can relate [this] to Mexico. We can relate it to all kinds of places. One day, it was my place. Next day, it became illegal,” she said. “The land under my foot becomes illegal because it belongs to someone else.”
EU for Rohingyas’ ‘dignified return’ to Myanmar
The European Union’s commissioner for humanitarian aid and crisis management has begunatwo-day visit to Bangladesh, to assess the ground reality of the Rohingya refugee crisis.
“Here in Bangladesh the scale of this emergency is painfully clear to see: This is the fastest-growing refugee crisis in the world,” commissioner Christos Stylianides said inastatement on the first day of his visit on Tuesday.
The visit comesaweek after the EU and its member states pledged more than 50 per cent of the US$ 344 million total funding raised at the international conference on the Rohingya refugee crisis held in Geneva.
Commissioner Stylianidesis visited the Kutupalong camp in Cox<SNG-QTS>s Bazar, where an EU-funded project is helping over 100,000 people, mostly vulnerable children and women, gain access to essential services, an EU news release said.
“The Rohingya people are not alone in these difficult times,” he said.
Stylianidesis also commended and supported “the generous approach” of the Bangladeshi authorities to the Rohingya people.
At the same time, he added, the EU “continues to insist on full aid access in Myanmar and is working to address the situation in Northern Rakhine state”.
The EU official recommended that every refugee should be registered properly and that “Myanmar takes all necessary steps to allow themavoluntary and dignified return in secure conditions”.
The commissioner will hold meetings with government officials of Bangladesh and humanitarian partners to discuss the international community’s response to the crisis and Bangladesh’s needs to move forward, the release said.
Source : http://en.prothom-alo.com
ရခိုင်ပဋိပက္ခအပေါ် ကန် ဖိအားပေး
by rightsforburma | Oct 30, 2017 | Myanmar, NEWS
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေး တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံ ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာ ရိုဟင်ဂျာမူစလင် သိန်းနဲ့ချီ အိုးအိမ်စွန့်ခွါ ထွက်ပြေးနေရတဲ့ အခြေအနေဟာ လူမျိုးတုံးသုတ်သင်ရှင်းလင်းတဲ့ပုံစံမျိုး ဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီး ဒီအခြေအနေကို လုံးဝလက်မခံနိုင်တဲ့အကြောင်း ဒီမိုကရက်အထက်လွှတ်တော်အမတ် Dick Durbin က ပြောပါတယ်။ အထက်လွှတ်တော်အမတ်ကို VOA သတင်းထောက် Greta Van Susteren တွေ့ဆုံမေးမြန်းထားပါတယ်။
Ms. Greta – အခုလို တွေ့ဆုံမေးမြန်းခွင့် ပေးတဲ့အတွက် အထက်လွှတ်တော်အမတ်ကို ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ် ပြုမှုပုံတွေဟာ လူမျိုးတမျိုးကို အမြစ်ပျက်ရှင်းလင်းမှု။ ဒါမှမဟုတ် လူမျိုးတုံး သတ်ဖျက်မှုလို့ ထင်လား။ အထက်လွှတ်တော်အမတ်အနေနဲ့ ဘယ်လို ယူဆလဲ။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့  တရားဝင် ရပ်တည်ချက်က ဘာလဲ။
Senator Durbin – လက်ရှိအစိုးရရဲ့  တရားဝင် ရပ်တည်ချက်ကိုတော့ ကျနော် မသိပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဒါက လူမျိုးတမျိုးကို အမြစ်ပြတ်ရှင်းလင်းချင်တဲ့ ပုံစံလိုမျိုး ဖြစ်နေပါတယ်။ အဲဒီလိုပုံမျိုး ဖြစ်နေတယ်ပေါ့။ ကျနော်ရဲ့  မိတ်ဆွေ မယ်ရီလန်းက အထက်လွှတ်တော်အမတ် Ben Cardin ကတော့ လူမျိုးတုံးသတ်ဖျက်မှုလို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုပုံစံပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုထဲမှာ ရှိနေတဲ့ ကျနော်တို့အနေနဲ့ ဘယ်ဘက်ကို ရပ်တည်တယ်ဆိုတာ လိုအပ်ပါတယ်။ လွှတ်တော်အမတ်တွေ တော်တော်များများ ဒီလိုပဲ လုပ်ဆောင်ကြမှာပါ။
Ms. Greta – ဒီကိစ္စက အမေရိကန်ပြည်သူတွေအတွက် ဘာကြောင့် အရေးကြီးလဲ။ ဒါက သိပ်ကိုအလှမ်းမဝေးလွန် မနေဘူးလားရှင့်။
Senator Durbin – လူတွေ မူစလင်တွေ၊ ရိုဟင်ဂျာတွေဟာ မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့  အကြမ်းဖက် ခြိမ်းခြောက်မှုတွေကို ခံနေရပါတယ်။ သူတို့ရဲ့  နေအိမ်တွေ မီးရှို့ ခံရတယ်။ အသတ်ခံရတယ်။ အဓမ္မပြုကျင့်ခံရတယ်။ ရွှေ့ ပြောင်းတိမ်ရှောင်ရတဲ့ လူဦးရေဟာ သိန်းနဲ့ချီ ရှိပါတယ်။ နတ်မြစ်ရပ်တဘက်ကမ်းကို ဖြတ်ကျော်ပြီး ဒုက္ခသည်စခန်းမှာ သူတိုိ့ကို ထားပါတယ်။ စိတ်ချလုံခြုံမှု မရှိတဲ့၊ နေချင်စရာ မကောင်းတဲ့ အစိုးဝါးဆုံး အခြေအနေတွေမှာ ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ ဒါတွေဟာ လုံးဝကို လက်မခံနိုင်တဲ့ ကိစ္စပါ။
Ms. Greta – တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေကို နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ပေးတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့  ၁၉၈၂ ခုနှစ် ဥပဒေထဲမှာ ရိုဟင်ဂျာတွေကို လုံးဝဖယ်ထုတ်ထားခဲ့တယ်။ ရိုဟင်ဂျာတွေ အဲဒီနေရာမှာ နေထိုင်၊ သိမ်းပိုက်မှာကို ဘာကြောင့် သူတို့ အပြင်းအထန် ခုခံနေကြသလဲရှင့်။
Senator Durbin – ကျနော်တို့ နားလည်ရသလောက်ကတော့ သူတို့ဘက်က အကြောင်းပြချက်တွေက ရိုဟင်ဂျာတွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ မဟုတ်ဘူး။ သူတို့တွေဟ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှဘက်ခြမ်းက ပါလာတဲ့ ဘင်္ဂလီတွေ ဖြစ်တယ်။ ဒုတိယအချက်အနေနဲ့တော့ သူတို့တွေဟာ မူစလင်တွေ နေထိုင်တဲ့ နိုင်ငံထဲမှာ ရှိနေကြတယ် မူစလင်တွေဖြစ်ပေမယ့်လဲ တသန်းထက်မကရှိတဲ့ မူစလင်တွေကို ဘယ်တုန်းကမှ သူတို့ရဲ့  နိုင်ငံသားအဖြစ် လက်ခံထားကြတာ မဟုတ်သလို၊ ထည့်ထည့်ဝင်ဝင် ထိတွေ့ဆက်ဆံတာမျိုးလည်း မရှိကြပါဘူး။
Ms. Greta – မြန်မာစစ်တပ်ထဲက လူတချို့ ကတော့ သူတို့တွေက အကြမ်းဖက်သမားတွေလို့ ပြောကြပါတယ်။
Senator Durbin – အကြမ်းဖက်သမားတွေရဲ့  လုပ်ရပ်လိုမျိုး ကိစ္စတမျိုး ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ သတ်ဖြတ်မှု ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ကျနော်တို့ သိရသလောက်တော့ မြန်မာစစ်သားတွေ နဲ့ လုံခြုံရေးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ (၁၆) ဦးထက်မနည်း အသတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ ဒီအဖြစ်အပျက်ကို အပေါ်ယံကြည့်ရင် ကိုယ်ဖြစ်ချင်တဲ့ ပုံစံမျိုး ကောက်ချက်ချ ပုံဖော်ပြောလိုရပါတယ်။ အပြန်အလှန် တိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်း နှစ်ဘက်စလုံး အသတ်ခံခဲ့ရတာတွေ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်လို့ လူပေါင်း (၆) သိန်းလောက် တိမ်ရှောင်ကြရတယ်ဆိုတာကတော့ အတော့်ကို ဆိုးရွာတဲ့ လုပ်ရပ်တခုလို့ ပြောရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကိစ္စအပေါ် တာဝန်ရှိသူတွေရဲ့  ကိုင်တွယ်ပုံဟာ မျှတတဲ့ တုံ့ပြန်ချက်အတွက် ကျော်လွှန်တဲ့လုပ်ရပ် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအပေါ် အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုရမယ်ဆိုရင် လူမျိုးတမျိုးကို အမြစ်ပျက်ရှင်းလင်းမှုတခုဆိုတာ ရှင်းပါတယ်။
Ms. Greta – သြဂုတ်လ (၂၅) ရက်နေ့က ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အထက်လွှတ်တော်အမတ် ပြောနေတာဖြစ်တယ်။ ဒီကိစ္စကို အကြောင်းပြပြီးတော့ စစ်တပ်က မဟာဗျူဟာတခုလိုချပြီး စစ်တပ်က အဓမ္မပြုကျင့်တာတွေ၊ ရွာတွေကို မီးရှို့ တာတွေ လုပ်ပြီးတော့ မြန်မာနိုင်ငံ ရခိုင်ပြည်နယ်ဒေသထဲကနေ ဒီလူတွေကို တွန်းထုတ်ဖို့ လုပ်နေကြတယ်။
Senator Durbin – ဟုတ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းမှာ မနေ့တုန်းက ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မြန်မာသံအမတ်ကြီးကို ကျနော့်ရုံးခန်းမှာ ခေါ်တွေ့ပါတယ်။ ဒီကိစ္စဘက်မှာ ဒီမိုကရက်ဘက်၊ Republican ဘက်ကရော အထက်လွှတ်တော် ခုနှစ်ယောက်နဲ့ တစ်နာရီကျော် စကားပြော၊ မေးမြန်းတာတွေ လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ မေးထားတဲ့အချက်တွေကိုတော့ သူဘက်က တပတ်၊ နှစ်ပတ်အတွင်း ကျနော်တို့ကို အကြောင်းပြန်မယ်လို့ ပြောသွားပါတယ်။ ကျနော်တို့ဘက်က အသေအချာ ဂရုတစိုက် စောင့်ကြည့်နေတယ်ဆိုတာကို သူကို ပြောခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ကျနော်တို့ရဲ့  ဆက်ဆံရေးဟာ ဒီအခြေအနေကနေ ထွက်ပေါ်လာတဲ့ ရလဒ်တွေပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။ အဲဒီရလဒ်ကိုလည်း ကျနော်တို့အနေနဲ့ အမြန်ဆုံး လိုချင်ပါတယ်။
Ms. Greta – ဒီကိစ္စအပေါ် ပြစ်တင်ရှုတ်ချဖို့ ဆုံးဖြတ်ချက်တခုကို အထက်လွှတ်တော်အမတ်အနေနဲ့ အဆိုပြုထားပြီးပြီ။ ပါတီကြီးနှစ်ရပ်စလုံးရဲ့  ထောက်ခံမှုကို ရပြီလားရှင့်။
Senator Durbin – ရမယ်လို့တော့ ကျနော် ယုံကြည်ပါတယ်။ ပြောလို့တော့ မရသေးဘူး။
Ms. Greta – ဒါဆိုရင်လို့ရှိရင် ဒါကို ဥပဒေတခုအဖြစ်နဲ့ အတည်ပြုပါလား။
Senator Durbin – မူလကတည်းက ဒီဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ ပတ်သက်လို့ John MacCain က ကျနော့်ကို ထောက်ခံပြီးသာ။ ဆိုတော့ တခြားလူတွေကလည်း ကျနော်တို့ကို ထောက်ခံမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ပါတီကြီး နှစ်ရပ်စလုံးက ပါဝင်ပါလိမ့်မယ်။ ပြယုဂ်တရပ်အဖြစ် ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒီဆုံးဖြတ်ချက်မျိုး ကျလာမယ့် အချိန်အထိ ကျနော်တို့ စောင့်မနေချင်ပါဘူး။ ဖြေရှင်းကိုင်တွယ်မှုတွေကို အခုပဲ တွေ့ချင်ပါတယ်။ ဒီအစိုးရနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ အမှန်တကယ် လက်တွေ့ လုပ်ဆောင်ပြတာ၊ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာမျိုး တခုခုလုပ်ဆောင်ဖို့ ကျနော်တို့ တောင်းဆိုပါတယ်။ ပထမအနေနဲ့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ပြီးတော့ အစိုးရမဟုတ်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေပါဝင်တဲ့ သီးခြားလွတ်လပ်တဲ့ အဖွဲ့တွေကို ဖွဲ့ပြီး ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းက လက်ရှိ သူတို့ကို ရှင်းထုတ်ပြစ်တဲ့နေရာတွေကို ဝင်ခွင့်ပြုပြီး မြေပြင်မှာ ဘာတွေဖြစ်နေသလဲဆိုတာကို သူတို့ တွေ့မြင်ရပါမယ်။ ဒုတိယအနေနဲ့ ဒီလို ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ လုပ်ရပ်တွေမှာ ပါဝင်သူတွေ။ ရွာတွေကို မီးရှို့ ခဲ့တဲ့ မြန်မာစစ်တပ်ထဲက တာဝန်ရှိသူတွေကို အရေးယူပါလိမ့်မယ်။ တတိယအနေနဲ့က နေရပ်ပြန်နိုင်ရေးအတွက် စီစဉ်မယ်ဆိုရင်လဲ UNHCR ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ ကုလသမ္မဂ မဟာမင်းကြီးရုံးကို တာဝန်ပေးပြီး ဒီလူတွေကို စနစ်တကျ ခေါ်ဆောင်လာရပါမယ်။ နေအိမ်တွေ မီးရှို့ ခံရပြီး
ထွက်ပြေးတိမ်ရှောင်နေရတဲ့ သူတွေဆီကနေ စာရွက်စာရွက်တမ်း၊ အထောက်အထားတွေ တောင်းတယ်ဆိုတာ လုံးဝကို လက်တွေ့မကြပါဘူး။
Ms. Greta – အဖိနှိပ်ခံ ရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့  ပြဿနာကို ရှင်းပေးဖို့အတွက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ်မှာ အများကြီး မျှော်လင့်ထားကြပါတယ်။ ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်လို့ ပြစ်တင်ရှုတ်ချတာတွေ မလုပ်ခဲ့တဲ့ အတွက်ကြောင့်မို့ သူတို့ကို ကြံရာပါဆိုပြီး သတင်းခေါင်းကြီးပိုင်းတချို့ တွေမှာ တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒီတုံးက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ပတ်သက်လို့ ဘယ်လိုထင်လဲရှင့်။
Senator Durbin – ကျနော် သူကို သိပ်ပြီးလေးစားပါတယ်။ ကျနော် ပြောချင်တာက သူဟာ ဆယ်စုနှစ်တခုကျော် နေအိမ်အကျယ်ချုပ်နဲ့ နေခဲ့ရပါတယ်။ သူ့ရဲ့  တိုင်းပြည်မှာ ဒီမိုကရေစီ အစပျိုလာအောင် ခိုင်ခိုင်မာမာ ရပ်တည်လှုပ်ရှားနိုင်ပါတယ်။ ခေါင်းဆောင်တယောက်အနေနဲ့ ရပ်တည်ခဲ့ပါတယ်။ တိုင်းပြည်မှာ လိုအပ်နေတဲ့ ခိုင်မာအားကောင်းတဲ့ ခေါင်းဆောင်တယောက်အနေနဲ့ ရပ်တည်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီတိုင်းပြည်မှာ လိုအပ်နေတဲ့ ခိုင်မာအားကောင်းတဲ့ ခေါင်းဆောင်တယောက်ထက်တောင် ပိုပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံဟာ စစ်တပ်အုပ်ချုပ်ရေးကနေ ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူပြောင်းလာခဲ့တာ အခုဆိုရင် သက်တမ်းနှစ်တမ်းတောင် မရှိသေးပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ သူ့အနေနဲ့ အခုတိုင်းပြည်ထဲမှာ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေနဲ့ ပတ်သက်လာရင် အခုထက်ပိုပြီး တိုက်တိုက်တွန်းတွန်း ရှေ့ တိုးလုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်။
Ms. Greta – သူတို့လုပ်ရပ်တွေ မရပ်တန့်ဘူးဆိုရင် နောက် ဒဏ်ခတ်ပိတ်စို့မှုဒဏ်။ စစ်တပ်ကို တိုက်ရိုက်ဒဏ်ခတ်ပိတ်စို့တာမျိုး ရင်ဆိုင်ရနိုင်ပါတယ်။ စီးပွားရေးဒဏ်ခတ်ပိတ်စို့မှုတွေက အင်မတန်ဆင်းရဲလှတဲ့ နိုင်ငံကို ထိခိုက်မှာပါ။
Senator Durbin – ဒါဟာ ဒွီဟ ဖြစ်စရာပါ။ သူတို့ဘက်က မတုံ့ပြန်ရင် ဒါမှမဟုတ် ကျေနပ်လောက်တဲ့ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ တုံ့ပြန်မှု မပေးနိုင်ဘူးဆိုရင် ကျူးလွန်တယ်လို့ ယူဆရတဲ့ လူတွေအပေါ် မှတ်ထားပြီး ဒဏ်ခတ်ပိတ်စို့မှုတွေ လုပ်ပါတယ်။
Ms. Greta – သမ္မတ က သဘောတူမယ်လို့ ထင်လား။
Senator Durbin – သဘောတူမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သမ္မတက အရေးတယူ ဆောင်ရွက်မလားဆိုမလား အဆိုကိုတော့ ကျနော် မသိနိုင်ပါဘူး။
Ms. Greta – ဒီကိစ္စမှာ အမေရိကန်တွေ ပိုပြီးပါဝင်လာမှုက အကျိုးယုတ်စေတယ်လို့ ထင်ပါသလား။ အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေကို ရည်ညွှန်းတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ ပိုပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန် ကိုင်တွယ်သင့်တယ်ဆိုပြီး အမေရိကန်အစိုးရက တွန်းအားပေး လုပ်ဆောင်နေတာ အကျိုးယုတ်စေတယ်လို့ ထင်ပါသလား။
Senator Durbin – အကျိုးယုတ်စေတယ်လို့ မမြင်ပါဘူး။ ပြောရမယ်ဆိုရင် ဘာမှမလုပ်ဘဲ ငြိမ်နေတာကမှ အကျိုးယုတ်စေတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ မူစလင်အသိုင်းအဝိုင်းတခု နှိပ်ကွပ်ခံနေရတယ်ဆိုတာ အရှင်းကြီး မြင်နေရပါတယ်။ ကျနော်တို့က ဒီအသိုင်းအဝိုင်းဘက်ကနေ မရပ်တည်ပေးဘူးဆိုရင် ကမ္ဘာတဝှမ်းက မူစလင်တွေက သူတို့နဲ့ ဆက်ဆံရေးအပေါ် အမြင်လွဲသွားမှာပါ။
Ms. Greta – မြန်မာနိုင်ငံမှာ တခြားတိုင်းရင်းသားအုပ်စုတွေ ရှိပါတယ်။ ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင် အသိုင်းအဝိုင်းဖြစ်တဲ့ ကရင်တိုင်းရင်းသားတွေလည်း ရှိပါတယ်။ သမိုင်းတလျှောက်မှာ သူတို့တွေကလည်း အလားတူ ဖိနှိပ်မှုတွေ များစွာခံခဲ့ရတယ်ဆိုပေမယ့်လဲ အခုတွေ့နေရတဲ့ ရိုဟင်ဂျာအရေးလောက်တော့ လူအပြောမများခဲ့ပါဘူး။ သူတို့အတွက်နဲ့ သူတို့အပေါ်အတွက် အာရုံစိုက်မှုတွေ ရှိပါလားရှင့်။
Senator Durbin – ဖြစ်သင့်ပါတယ်။ ထောင်နဲ့သောင်းနဲ့ ရှိတဲ့လူတွေ ရွှေ့ ပြောင်းခံရတဲ့အကြောင်း သတင်းတွေ ထွက်ပေါ်လာတဲ့နောက်မှာ ရိုဟင်ဂျာအရေးကို အာရုံစိုက်လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကရင်တိုင်းရင်းသားတွေလည်း အရေးလည်း ထိုနည်းတူပါ။ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံ တည်ဆောက်မယ်ဆိုရင် ဘာသာရေးနောက်ခံမတူတဲ့သူတွေ။ လူမျိုးရေးနောက်ခံ ကွဲပြားသူတွေအပေါ် အမြင်ပွင့်လင်းစွာနဲ့ အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်နိုင်ဖို့ မျှော်လင့်သင့်ပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီရဲ့  အစိတ်အပိုင်းတွေပါ။ ခရစ်ယာန်ဖြစ်ဖြစ်၊ မူစလင်ဖြစ်ဖြစ် တသားတည်းဆောင်ရွက်သွားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Source : https://burmese.voanews.com
NGO owner Ushit Maung sent to jail after three-day remand
by rightsforburma | Oct 30, 2017 | English, NEWS
Police say the man, suspected of aiding terrorism, divulged important information in interrogation
NGO owner Ushit Maung Rakhaing, arrested on charges of aiding terrorism in Myanmar’s Rakhine, has been sent to jail afterathree-day remand. Police claim he has divulged important information in interrogation.
On Sunday, Airport police station’s Sub-Inspector (SI) Farhaj Hossain presented him in court and said that Ushit gave important information in remand and needed to be sent to jail for proper investigation.
According to police sources, the Rakhine Development Foundation (RDF), an NGO run by Ushit, is helping the extremist Rakhine community in Myanmar. His wife Sumraraja Leen alias Mamaya,aMyanmar national, has been actively involved in the Arakan Liberation Party (ALP). She lives in Myanmar.
ALP has taken an anti-Rohingya stance in the ongoing Rakhine violence. Police have found that RDF is working to fund the group, the source claimed.
Rapid Action Battalion (RAB) arrested Ushit, 67, on terrorism charges while he was boardingaflight to Myanmar at Hazrat Shahjalal International Airport in Dhaka on October 18.
Airport police’s Officer-in-charge Noor-e-Azam Mia told the Dhaka Tribune that Ushit had been detained after suspicious photos and documents were allegedly found on his laptop. In those pictures, Maung’s wife Sumraraja Leen alias Mamaya was seen holding weapons.
“Ushit and Sumraraja used to gather intelligence and send it to the authorities concerned in the neighbouring country. They also used to provide monetary assistance to the ALP,” the officer claimed.
“We got some important information from him, which are being scrutinised. We cannot disclose the information for the sake of investigation,” he said.
Source : http://www.dhakatribune.com/bangladesh
UN investigators confirm ‘methodical’ killings, rape of Rohingya
by rightsforburma | Oct 27, 2017 | English, NEWS
Rohingya refugees fleeing Myanmar have testified thata“consistent, methodical pattern” of killings, torture, rape and arson is taking place, United Nations human rights investigators said on Friday afterafirst mission to Bangladesh.
The fact-finding team, led by former Indonesian attorney general Marzuki Darusman, said the death toll from the Myanmar army’s crackdown following Rohingya insurgent attacks on Aug. 25 was unknown, but “may turn out to be extremely high.”
“We have heard many accounts from people from many different villages across northern Rakhine state. They point toaconsistent, methodical pattern of actions resulting in gross human rights violations affecting hundreds of thousands of people,” Darusman said inastatement.
The team of three independent experts spent six days interviewing some of the 600,000 Rohingya from Myanmar’s northern Rakhine state who are in refugee camps near Cox’s Bazar. An advance team of U.N. rights officers have been conducting comprehensive interviews for weeks, it said.
“We are deeply disturbed at the end of this visit,” Darusman said.
Radhika Coomaraswamy, another member and veteran U.N. human rights investigator, said she was left “shaken and angry” by the testimonies.
“The accounts of sexual violence that I heard from victims are some of the most horrendous I have heard in my long experience in dealing with this issue in many crisis situations,” she said. “One could see the trauma in the eyes of the women I interviewed. When proven, this kind of abuse must never be allowed to go unpunished.”
The third member, Christopher Sidoti, said that Rohingyas must be allowed to return to Rakhine if they wish, but only after mechanisms are put in place to ensure their safety.
“That may require the placement of international human rights monitors in Rakhine State,” he said.
Source : https://beta.theglobeandmail.com